Xafladdii Daahfurka Warsidaha KOBCIYE Ee Bristol |
Xafladdii Daahfurka Warsidaha KOBCIYE Ee Bristol
Waxa bishan aynu ku jirno 1-deedii lagu qabtey xaflad aad loo soo agaasimey oo ay ka soo qeyb galeen dhammaan bulshada ku dhaqan magaalada Bristol. Xafladdaasi oo lagu daahfuraayey warsidihii abid ugu horreeyey ee Af-soomaali iyo Af ingiriisi ah ee ka soo baxa magaaladaasi. Warsidahan oo lagu wanqalay magaca KOBCIYE waxa uu xogga saarayaa dhinaca wacyigelinta ee waalidka, carruurta iyo dhallinyarada qurbaha ku nool. Isaga oo soo bixi doona sannadkii afar jeer.
Warsidaha KOBCIYE waxa uu xogga saari doonaa in lagu soo daabaco qoraallo tayo sarreeya oo ka turjumaaya baahida dhabta ah ee wacyigelineed ee ay u baahan yihiin bulshada Soomaaliyeed eek u dhaqan waddankan Ingiriiiska ama Yurub oo dhan.
Xafladdii daahfurka waxa ka soo qeyb galay aqoonyahanka, waxgaradka, waayeelka, waalidka, odayaasha, haweenka, dhallinyarada, iyo ubadka ku dhaqan magaalada Bristol. Waxa madasha ka Hadley aqoonyahankii ka soo qeyb galay xafladda sida; Suldaan Mahdi, Cabdi Cumar Boobe, Siciid Jeeniyare, Abaadir Muuse Diirriye, Xasan Cadhoole, Yaasmiin Daahir, , Axmed Dhagaxtuur, iyo guddida sare ee warsidaha. Dhammaan akhyaartaasi dusha ku xusani waxa ay isku raacsanaayeen oo hadalkoodu u badnaa sidii loo tageeri lahaa, tayeyn lahaa, ama loo joogteyn lahaa warsidaha, iyo iyaga oo ku dheeraadey sidii ay ugu qancin lahaayeen waalidka inuu aad uga faa’iideysto warsidahan oo iyaga la hadlaaya.
Siciid M. Xusseen
Ugu horreyn Siciid Muxumed Xuseen oo ku hadlaayey afka guddida sare ee warsidaha ayaa martida ku soo dhaweeyey xafladda, isaga oo uga mahadnaqey sida wacan ee ay uga soo qeyb galeen, una taageereen iney qabsoonto xafladdani, isaga oo ku dheeraadey sababta ay xafladda u qabteen, iyo waliba sababta ay u soo saareen warsidahani.
Khaalid Jaamac Ahmed (Qodax)
Dhanka kale Tifaftiraha guud ee Magazin-ka Khaalid Jaamac Qodax, ayaa isaguna si faahfaahsan uga Hadley qeybaha uu ka kooban yahay, ujeeddooyinka laga damacsan yahay, iyo maraaxilkii uu soo marey warisdahani. Isaga oo ku dheeraaday in ay damacsan yihiiin sidii carruurta qurbaha ku kortey iyo waalidkood ay saameyn ugu yeelan lahaayeen ah dhinaca, barashada afka, dhaqanka, iyo baraarintaba. Waxa kale oo uu si guud iyo si gaara ugu dheeraadey in ay damacsan yihiin sidii ay u joogteyn lahaayeen, una gaadhsiin lahaayeen dhammaan dadka afka Soomaaliga ku hadla ee deggan waddankan Ingiriiska, iyo waliba waddankii.
Dhanka kale waxa uu ku dheeraadey tifaftirahu in ay qorsheynayaan in warsiduhu uu noqon doono mid laba luqadood ku soo bixi doona, si dhallinyarada qurbaha ku korey ay u fahmaan, ungana faa’iideystaan si wacan.
Ugu danbayn Khalil Cabdi Adan oo ka mid ah guddida sare ee Warsidaha ayaa u mahadnaqay dhammaan martidii iyo waalidiintii iyo carruurtii wakhtiga u soo huray daahfurka Magazine kan aan hore noociisu uga soo bixi guud ahaan wadanka Ingiriiska.
Khalil A Abdi